Maalinta: Abriil 14, 2020
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa ayaa dardar galisay howlaha cusboonaysiinta ee loo yaqaan 'Aspalt orda' ee tareenka maaddaama qulqulka taraafikada uu istaagay Atatürk Street. Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay la halgameysaa la tacaalidda inteeda badan tamarteeda masiibada 'Covid 19'. [More ...]
Golaha Sayniska iyo tignoolojiga Research of Turkey (TUBITAK) waxaa lagu dhawaaqi doonaa 99ka shaqaalaha ku yiri hadal uu. Golaha Cilmi baarista cilmiga ah iyo tignoolojiga ee Turkey (TUBITAK) Department of Aqbaarta iyo Xarunta Cilmi Technology Information Security Advanced [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya, oo si joogto ah u fulisa wasakhda gaadiidka dadweynaha marka la eego noocyada cusub ee tallaabooyinka coronavirus, waxay fulisaa qawaaniin waafaqsanna qawaaniinta masaafada bulshada ee gaadiidka dadweynaha ee loogu talagalay caafimaadka muwaadiniinta. Gaadiidka dadweynaha [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu ayaa faray abaalmarinta shaqaalaha IETT ee dayactiraya 70 doolar ee qaybta ka hartay qaybta metrobus ee burburay habka kaliya ee ay heleen. Mashiinka korantada Mustafa Kabaoğlu, makaanik [More ...]
Dhismooyinkii hore ee TCDD ayaa loo qoondeeyey Xirfadlayaasha daryeelka caafimaad
Shaqaalaha Caafimaadka ee Degmadda Bilecik Degaan ku meel gaar ah iyo Deganaansho Nasiinno, oo ay u diyaarisay degmada Bilecik ujeeddadiisu ahayd hoyga iyo nasashada shaqaalaha caafimaadka ee la halgamaya cudurka faafa ee “Covid-19” corona), ayaa la galiyay adeeg. Degmada Istasyon [More ...]
Aasaasaha BTP Haydar Baş Corona wuxuu ku dhintey Virus
Xisbiga Turkey-bannaan (BTP) Guddoomiyaha Haydar BAS, virus Corona Trabzon (Covidien-19) naftiisa u lumiya in isbitaalka lagu daweynayo sabab saaka. Shalay, ayay ahayd markii Haydar Baş iyo qoyskiisa uu ku dhacay fayras corona ah [More ...]
Wadada Waqooyiga Marmara Nakkaş-Başakşehir Qaybta Jinsiga Dib ayaa loo dhigay
Wadada Waqooyiga Marmara (oo ay kujirto Buundada 3aad ee Bosphorus Bridge) Mashruuca Nakkaş-Başakşehir (oo ay kujirto wadooyinka isku xira) qaybta qandaraaska ayaa dib loo dhigay 30ka Juun. Sida ku xusan ogeysiiska Agaasimaha Guud ee Wadooyinka, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo lagu daabacay Jariidada rasmiga ah, Dhismaha-Ku-Shaqeynta-Bedelka [More ...]
EGİAD Aegean Ganacsato Dhallinyarro ah ayaa abaabushay dhacdo internetka ah oo lagu qiimeynayo saameynta ay COVID-19 ku leedahay dhaqaalaha iyo shirkadaha iyo xirfadaha dhijitaalka ah ee ay khubarada maaliyadeed iyo xisaabaadka ku yeelan karaan adduunka isbeddelada. dhallinyarada [More ...]
Afar Muwaadiniin ah oo ay badbaadisay Mashiinnadooda ayaa lagu keydiyey Antalya
Magaalada Antalya, Dawlada Hoose waxay badbaadiyeen afar muwaadin oo ku xayiran matoorkooda aagga Alacabel ee Akseki. In kasta oo gu'ga uu khibrad u leeyahay meelaha xeebta ah ee Antalya, Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay sii waddaa inay kula dagaallanto barafka meelaha sare ee qaybaha sare. Goobta Alacabel ee Akseki plateau [More ...]
KPMG dalka Turkiga, ayaa cilmi-baaris sida ay u saamaysaa dunida ganacsiga Covidien-19. Wakiilo ganacsi oo kaqeyb galaya sahanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal sano loobaahanyahay in lagu ciribtiro saameynta xun ee cudurka dilaaga ah ee aduunka ku yeeshay dhaqaalaha. KPMG dalka Turkiga [More ...]
Tababbarka Covid-19 ee loogu talagalay Shaqaalaha Aaska
Lahaanshaha daganaan naxariis darada ah ee cudurka dilaaga coronavirus ee Kocaeli, Dowlada hoose ee Magaaladda waxay shaqaalaheeda ku tababartaa ka hortaga fayraska. Laanta Adeegyada Aaska ee loogu talagalay habraaca aaska ee muwaadiniinta u dhintay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' iyadoo la raacayo qawaaniinta [More ...]
250 Taageero Isgaarsiineed oo Daqiiqadeed Ka Socda Izmir Metropolitan ilaa Muwaadiniinta
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay ku dartay mid kale ololaheedii gargaarka oo la bilaabay daacuunka 'coronavirus'. Metropolitan, 65 sano jir ah oo raba inay la xiriiraan kuwa ay jecel yihiin maalmaha adag, kuwaaso looga baahan yahay inay taleefan soo wicitaankooda ku saabsan baahiyahooda u qabtaan. [More ...]
Muhiimad Taariikhi ah oo Tareenka Tareenka Yenice ee u dhow Adana
Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, sanadkii 1943, Madaxweynaha İsmet İnönü wuxuu Raiisel Wasaaraha Britain Winston Churchill kula kulmay gaari-tareenka saldhigga tareenka ee Yenice ee u dhow Adana. Xiriirkan labada maalmood socday, ee loo yaqaan Shirarka Adana, [More ...]
Magaalada Bursa, waxaa la go'aamiyay in lagu isticmaalo waji-xidhka baabuurta khaaska ah ee leh in kabadan hal qof. Isla mar ahaantaana, 19 Adeegyada Caafimaadka Degdegga ah ee loogu talagalay kuwa diiday in ay isbitaal galaan in kasta oo Kovid -112 laga helay magaalada. [More ...]
Digniinta ka timid kaarka amaahda ee khiyaamada ka timid Wasaaradda Ganacsiga
Wasaaradda Ganacsiga ayaa uga digtay muwaaddiniinta khiyaanooyinka noocaas ah, iyagoo sheegaya in hay'adda rasmiga ah ama astaanta dawladda ee ah in aan la iloobin akoonnada warbaahinta bulshada ee sheegta inay "soo celinayaan khidmadda kaararka deynta". Waxaa laga sameeyay wasaaradda [More ...]
RayHaber 14.04.2020 Warbixinta Shirka
Shaqaalaysiinta Seamen iyo Shaqaalaha Grasshopper Sakarya Nostalgic Tram Line ayaa la dhisi doonaa (Kartida Joogtada ah) Dayactirka iyo Dayactirka Khadka Kireynta İZBAN Kireystayaasha Xiisadda Qaadashada Aluminotermite Rail Welding Work
Talo soo-jeedinta Maareynta Dillaaca ee Golaha Sayniska IMM
Kadib go'aankii bandoowga, Guddiga Sayniska ee IMM waxay sameeyeen bayaan ay ku xusuusinayaan maareynta dagaalka sayniska ee ka hortaga cudurka faafa, gaar ahaan xadgudubyada masaafada u dhexeeya bulshada ee Istanbul. Ku dhawaaqida bandoowga Jimcaha [More ...]
Magaalooyinka waaweyn ee 30ka ah, bandoowga waxaa lagu dhawaaqay dhamaadka usbuuca, howsha xaddidan ee dhaqaalaha ayaa joogsatay. In kasta oo ay xaaladdan oo dhami jirto, Buundada Saddexaad, oo aan lahayn gawaadhi, iyo [More ...]
Jawaabta Bandoowga laga soo qaaday Imamoglu: Waxaan rajeynayaa inaysan ku kici doonin Saacado kooban!
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu si toos ah uga qeyb galay baahinta tooska ah ee saxafiga Özlem Gürses ee ka baxa TVga Halk. İmamoğlu wuxuu weydiiyay Gürses su’aal ah sababta uusan bandow uga jirin Istanbul, “Mudane Madaxweyne, 2 isbuuca soo socda. [More ...]
Xarunta Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Eryaman, hore ee Ankara West High Speed ​​Train Station, waa xarun Tareenka Xawaaraha Sare ku yaal oo ku taal degmada Etimesgut ee Ankara. Saldhig, Ankara-Istanbul iyo Ankara-Konya oo leh khadad xawaare sare leh [More ...]
Bandooga ayaa mar kale soo baxay. Ka dib markii laga dooday waqtiga go'aanka la hirgaliyay usbuucii la soo dhaafay, bandoowga la dhaqan gelin doono usbuuca dhamaadka ayaa la shaaciyey 5 maalmood ka hor. Bandow lagu dhawaaqay Madaxweyne Erdogan [More ...]
Xarunta Polatlı YHT
Polatlı High Train Station waa Saldhig Tareen Xawaare Sare ku yaal oo ku yaal degmada Polatlı ee Ankara. Saldhigga wuxuu ku yaal koonfurta-bari ee Polatlı wuxuuna u shaqeeyaa wadooyinka-tareenka xawaaraha-dheer ee Ankara-Istanbul iyo Ankara-Konya. Saldhig, [More ...]
Wadada Wadada Tareenka ee cusub ee Turkmenistan oo la furay